4. Chrismas Photo >
Ma sugi karo si aad u hesho gacmahaaga ku dambeeyay Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah? Ma ahan meel aad u fog laga bilaabo hadda, in ka yar 3 maalmood! Sida la joogo aad ayaan qoraal qodobkan, wakhtiga waa la soo sax. Haddii aad raadineyso macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan in Mid ka mid ah Madaxweyne Siilaanyo ee si aad u buuxiso doonayo hadiyad Christmas ee sannadkan, in barta saxda ah aad u yimid! Dhegto dhagan sabab u noqon doonaa masaafo ku socoto!
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Taariikhda Release iyo Price
Sida loo Pre-si One Madaxweyne Siilaanyo Oo ah u Christmas?
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ee dib u eegidda Pre-Daahfurka
2013 Best Holiday kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
The taariikhda lagu sii daynayo rasmiga ah ee Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ayaa la qorsheeyay 22-ka bishii November, 2013 (Friday a). Qiimaha lagu iibiyo ee set oo ah Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah waa $499.99, oo ay ku jiraan Kinect iyo sidoo kale ilaaliyaal mooshin. Si kastaba ha ahaatee, waxa kale oo aad isticmaali kartaa iyada oo xidhmooyinkana bixiyeen, iyadoo qaar ka mid ah kulan caanka ah; maala ama xataa Madaxweyne Siilaanyo LIVE ee xubinnimada.
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ayaa Details.
Waxaa la dhisay-in la xusuusta ah 8GB gudaha iyo guryo la mid ah 8 muhiimka ah ee ay processor kaliya sida Playstation 4 cusub bilaabay (ka yar hal toddobaad ka hor 15-ka November oo keliya suuqa North American ee, laakiin waxaa adduunka oo bilaabay doonaa 29-ka of November). 500GB ee kaydinta heli karaa hubaal ka geystaa horumarinta ururinta shakhsi ah videos, kulan, music iyo wax ka badan. Taasi waa ku dhawaad ​​muhiim ah double-up ka horreeyay.
8 core Microsoft Custom processor la 8GB xasuusta gudaha (DDR3)
500GB ah meel lagu kaydiyo oo la dibadda kaydinta dhex USB
USB 3.0 (3 dekedaha)
Wi-Fi Direct u la xidhiidha aaladda
Wixii macluumaad dheeraad ah, ka soo hubi HALKAN .
Fiiro gaar ah : Waa update khasab ah hal maalin.
U yeelan doontaa in meel aad si ama pre-si One Madaxweyne Siilaanyo Oo ah u Christmas ka aqoonsan yahay in aad dukaamada sida GameStop , Walmart , Best Buy ama Alaabta "R" Us iyo Amazon . Goobta qayb gala online kale waaweyn sida Arbacada ah waxaa laga bilaabo qiimaha ugu yar oo ah $ 700. Sidaa awgeed, waxaa fiican in ay ka fogaadaan haddii aad si dhab ah ugu baahan in uu si gaar ah mid ka mid ah! Si kastaba ha ahaatee, waxa ay maalgashi ku istaahilo in haddii ay ka caawisaa in ay keenaan qoyska oo dhan ama goobo saaxiib ka dhisan xilli ciyaareedkii celebrative. Sida waano u tur, tag oo kaliya hab aad.
Nasiib darro, ma aad yeelan doontaa in ay ciyaari aad Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 ama kulan kale Console ka weyn ee One Madaxweyne Siilaanyo Oo sida ay tahay aan gadaal socon. Tani waa wax laga caroodo, laakiin inaan idin siiyo samir qaar ka mid ah, mana uusan Playstation cusub bilaabay 4. Sidaas, waxaa aad u tagtid!
Mid ka mid ah Madaxweyne Siilaanyo ayaa la tirtiro lahaa shaqo ee hore u arkay on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 oo uu awood u leeyahay in la kordhiyo Console ka galay Windows Media Center (ie waxyaabaha muraayad ka PC in ay TV-ga). Tani ayaa hadda loo bedelay sifooyinka SmartGlass oo awood u siin doona user Mirror waxyaabaha ka casriga ah ama kiniin Console lahayd.
Xilligan la joogo, ma jirto erayo ama liiska laga heli karaa nooca files lahaa Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah taageero iyo rajeynayaa u bixin doonaa doorasho guud ahaan wax yar marka la barbar dhigo ururka ka horeeyey. 360 Madaxweyne Siilaanyo ayaa ugu yaraan loo maqli karo video files in qaabka wmv, VC-1, MPEG-1, MPEG-2, H.264, MPEG-4 iyo sidoo kale audio lagu kaydin karaa in qaab WMA iyo MP3. Si kastaba ha ahaatee, uma noqon doono yaabin haddii ay leeyihiin sharciyo adag oo la mid ah ay xafiiltamaan Adag, PS4 ah marka la eego dib ciyaaro aad videos. Haddii aad u baahan tahay si loogu badalo faylasha aad hore, si fudud u akhri sida aad go'aan ka gaari kara on video ah Converter xaq xaq HALKAN .
2013 Best Holiday kulan Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah - fiican ee Christmas
Haddii aadan soo ciyaaray qaar ka mid ah kulamada iyo jeclaan lahaa in dheeraad ah oo ku saabsan garan, si fudud ayaad ka fiirin kartaa labada GameTrailers ama IGN Adduunka . U yeelan doontaa in ay akhriyaan iyada oo dib u eegista, qiimaha, waafaqid, updates iyo wax ka badan in aad.
Sarakicidda kuwii dhintay 3
Raadinayo si aad u hesho kulan ee qayb ka ah soo socda Christmas ee sarrifka hadiyad? Waxaad si fiican u hubiso in ay tahay playable ku consoles'ka in ay leeyihiin ama haddii kale waxa ay noqon doontaa ceeb sameeyo. Faahfaahin dheeraad ah oo la gelin doono Top 20 Best-Iibinta Game horyaal u consoles'ka Your . Waxaa laga yaabaa in aad ku siin doonaa fikrad fiican.
> Resource > Video > Sida loo Pre-si Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Wixii Christmas?